Apple inotanga kutengesa zvimwe zvinodzokororwa Apple Watch Series 3 mamodheru | Ndinobva mac
Apple inotanga kutengesa yakagadziridzwa Apple Watch Series 3 mamodheru
Ichitevera kuvandudzwa kweApple's Official Refurbished Products Store (US-chete), iyo Cupertino-based kambani ingo wedzera mamwe maApple Watch Series 3 mamodheru. Ino inguva yekutanga iyo kambani yekuNorth America kuisa wachi yakangwara pakutengesa yeiyo brand seyakagadzirwazve chigadzirwa, mushure meimwe mhosva diki yakawanikwa mufekitori.
Iyo dhisikaundi inobatika, ingangoita $ 50, zvinoreva kuti kuderedzwa kweinenge 15%. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti, panguva ino, hapana yemhando dzakapihwa dzinopa mukana wekubatana kweLTE.
Iwo mamodheru aripo parizvino anotevera:
38mm Goridhe Apple Tarisa nePink Sport Sport: inouya nemutengo we $ 279; mutengo wekare we $ 329.
42mm Apple Tarisa Space Grey Aluminium ine Nhabvu Sport Bhendi: nemutengo we $ 309; mutengo wekare $ 359.
Iyo Apple Watch Series 3 yakaunzwa munaGunyana 2017, pamwe neiyo itsva iPhone mamodheru, uye ndiyo yekutanga modhi yekupa sarudzo neyakavakirwa-mukati LTE. Panguva ino, iyi modhi haina kutengeswa sechigadzirwa chakagadziridzwa, asi tekinoroji kambani inogadziridza anowanikwa zvikamu pamwe nemamodeli kazhinji, saka kana iwe uchinyatsofarira kuwana chimwe chezvinhu izvi, zvinokurudzirwa kuti utarise kufamba kunogona kuitika.
Aya marudzi emikana yemusika mukana wakanaka kune tora zvigadzirwa zvenyeredzi zvekambani nemutengo wakaderera painosunungurwa pamusika. Mune ino kesi, iyo yekuchengetedza mune ese maviri mamodheru angave angangoita makumi mashanu emadhora.
Sezvo isu tichiziva, zvese zvakagadziridzwa zvigadzirwa, enda kuburikidza neyakaomarara mhando uye yekudzivirira maitiro pamberi kuti ipiwe kuruzhinji. Kunge chero chimwe chigadzirwa cheApple, ese aya mamodheru anouya newarandi yegore rimwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inotanga kutengesa yakagadziridzwa Apple Watch Series 3 mamodheru